ကြောင်ကြောင်တွေး၊ ကြောင်ကြောင်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြောင်ကြောင်တွေး၊ ကြောင်ကြောင်ရေး
Posted by ကြောင်လေး on Oct 8, 2011 in Creative Writing, Critic | 11 comments
မိုးကြိုးလက်နက် သိကြား စက်
အခုတလော တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ မကြာခဏပြတ်တောက်နေပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးနဲ့နီးစပ်တဲ့ သူတွေကို မေးကြည့်လိုက်တော့ ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အချိန်မှာ
စက်တွေ ပိတ်ထားရကြောင်းပြောပါတယ်။ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို မိုးကြိုးထိပြီး
ပျက်စီးမှာစိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြိုတင်ပြီးပိတ်လိုက်ရင် နာရီပိုင်းပဲ အဆက်အသွယ်
ပြတ်တောက်နိုင်ပေမဲ့၊ မိုးကြိုးထိသွားရင်ရက်နဲ့ချီပြီးကြာသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မိုးကြိုးအကြောင်းစဉ်းစားမိပါတယ်။
မိုးဦးကျရာသီနဲ့ အခုလို မိုးနှောင်းပိုင်း ရာသီတွေ ဟာ မိုးကြိုးပစ်မှုအများဆုံးရှိနိုင်တဲ့အချိန်ပါ။
မိုးကြိုး ပစ်ရခြင်း အကြောင်း အကြမ်းဖျင်းသိထားတာက ပူရာကနေရုတ်တရက် အေး
၊အေးရာက ရုတ်တရက်ပူ တဲ့ကာလဟာ လေထု သိပ်သည်းဆတွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး
ဒီတိမ်တွေထဲမှာ လျှပ်စစ် ဓါတ်ဖိုဆောင်တဲ့ တိမ်တွေနဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်မ ဆောင်တဲ့ တိမ်တွေဟာ
လေထုထဲမှ ရုတ်တရက်ထိမိပြီး ကြီးမားတဲ့လျှပ်စီးတန်းကြီးဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ကျရောက် လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုကျရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ လူ၊သတ္တ၀ါတွေဆိုရင် သေကြေသွားပြီး၊အပင်နဲ့အချို့အဆောက်အဦ တွေဆိုရင်မီးလောင်သွားကြပါတယ်။
တီဗွီ၊ရေဒီယို၊ တယ်လီဖုန်း၊ လျှပ်စစ်လှိုင်းထုတ်လွှတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဆိုရင်တော့စက်ကွင်းမိရင်တောင်
ပျက်စီးသွားကြပါတယ်၊တိုက်ရိုက်ထိရင်တော့ မီးလောင်တဲ့အထိပါဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါကသိပ္ပံနည်းကျသိထားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ် ကလူကြီးသူမတွေပြောတာကြားရတာ (အခုထိလည်း အချို့ ဘွဲ့ရပညာတတ်၊ တချို့ပြောနေကြတုန်းပါ။)
ကတော့ သိကြားမင်းက မိုးကြိုးဆိုတဲ့လက်နက်နဲ့ ပစ်ခတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
“မိုးကြိုးလက်နက်၊ သိကြားစက်ဆိုပြီး” တောင် ဘုရားရှိခိုးစာလိုလို ဘာလိုလို ရွတ်ဖတ်ကြတာပါ။
မိုးကြိုးပစ်လိုက်တဲ့နေရာကို နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းသွားရှာရင် မိုးကြိုးသွားဆိုတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကွင်းပြင်ထဲ၊လယ်ကွင်းထဲပစ်ရင်လည်း ပစ်တဲ့နေရာကို စလောင်းဖုံးနဲ့ အုပ်ထားရင်
နှစ်ရက်သုံးရက် ဆိုမိုးကြိုးသွားရတယ်ဆိုတာ လူတော်တော်များများ ကြားဖူးကြမှာပါ။
ဟိုးတုန်းက မြေအိုး မြေစလောင်းဖုံး တွေပဲရှိတာပါ။ ဒီခေတ်မှာ ဒန်စလောင်းဖုံးနဲ့
သစ်ပင်တွေရဲ့သစ်ကိုင်းတွေဟာ တိကနဲပြတ်ကျသွားတာတွေ။ ထန်းပင်တွေထက်ခြမ်းကွဲသွားတာတွေ
သစ်ပင်အဖျားတွေမှာမီးတောက်လောင်နေတာတွေ ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဒီမိုးကြိုးသွားဆိုတာကိုတော့တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး။ မိုးကြိုးသွားဟာပေါက်ဆိန်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ် လို့ဆိုကြပါတယ်။
အရွယ်အစားအကြီးအသေးလဲ မတူကြပါဘူးတဲ့။ သံသွားနဲ့ ကြေးသွားဆိုပြီးတော့လည်းရှိ ပါတယ်တဲ့။
ဒီပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိသူဟာ အစွမ်းထက်ပါတယ်တဲ့၊ဓါးပြီး၊ တုတ်ပြီး၊ သေနတ်တောင်ပြီးပါတယ်တဲ့။
ရွာတွေမှာ ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းဝယ်ကြတာတွေ၊ ပြီး မပြီး စမ်းသပ်ရင်းနဲ့ ဆေးရုံရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့
သတင်းမျိုး တွေလည်း မကြာခဏ ကြားရတတ်ပါတယ်။ဈေးလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုပဲ။
သိကြားမင်းဟာ လူ့ပြည်ကို တကယ်ပဲပေါက်ဆိန်တွေနဲ့ပစ်သလား၊ မိုးကြိုးသွားဆိုတာတကယ်ရှိသလား၊
မိုးကြိုးသွားဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ၊ မိုးကြိုးသွားဟာတကယ် ဓါးပြီး၊ တုတ်ပြီး၊
ဒီရွာထဲမှာ မိုးကြိုးသွားကို တွေ့ဖူးသူတွေ ၊ မိုးကြိုးသွား ပိုင်တဲ့သူတွေ ရှိရင် ဓါတ်ပုံလေး တင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းပြပေးကြရင် တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမယ်…
စာထဲမှာ သင်ဖူးသလို ရှိပေမဲ့..မေ့ကုန်ဘီမိုလို့ ..
အသံထက် လျှပ်စီးက ပိုမြန်တော့
မိုးကြိုးပစ်သံ ကြားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ …မိုးကြိုးပစ်မခံရတော့ဘူးဆိုတာတော့ မှတ်မိတယ်..
လျှပ်စီးတန်းနဲ့ လာပြီး..မြေပေါ်..မြေအောက်..ထဲက လျှပ်စီးနဲ့ ဒြပ်ပြုနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းပြီး..
ဒြပ်ထု ဖြစ်လာတာလို့ လဲ ထင်တယ်..အဲကျမှ အစိုင်အခဲဖြစ်ပြီး မိုးကြိုးသွားပါဆိုပြီး ဖြစ်လာတာနေမပေါ့
စ.ပစ်ကတည်းက မိုးကြိုးသွားနဲ့တန်းပစ်တာမဟုတ်လောက်ပါဘူး..
ပုံ။ ။ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာရမ်းပေါက်
ကျွန်တော် အိမ်ရှေ့မှာ အရင်က မိုးကြိုးပစ်ဖူးတယ်… အဲ့အိမ်က လျှပ်စစ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အကုန်ပျက်စီး သွားတယ်.. ဒါပေမဲ့ ပစ်ချလိုက်တဲ့ မြေနေရာမှ မိုးကြိုးသွားပေါ်ခဲ့တယ်… မိုးကြိုးသွားက မိုးကြိုး ပစ်ပစ်ခြင်း သွားတူးလို့မရဘူး.. တစ်ရက်လောက်နေပြီးမှ သွားတူးကြည့်ရတယ်… လက်တစ်ဆစ်သာသာ ကျောက်ချောင်းမျိုးလေးတော့ တွေ့တယ်… အဲ့အိမ်က ခုထိ အဲ့ဒါကို သိမ်းထားတယ်… အဲ့မိုးကြိုးသွား ရပြီး အဲ့အိမ်လဲ တော်တော် စီးပွားတက်လာတာ သတိထားမိတယ်…။ ခုဆို တော်တော်ကြီး ချမ်းသာနေကြပြီ…။
ကိုပေါက်ဖော်ပြောတဲ့ သိပ္ပံအတွေးလည်း မှန်ပါတယ်… ကျနော်ကတော့ ဓါတ်သဘောနဲ့ပြောရင်တော့… အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်တာပါ… ဒါကိုတော့ ကျနော်က နိမိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ အရင်ပြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်…. (အတိအကျအနေနဲ့တော့ မိုးကြိုးသွားက စီးပွားအင်မတန်တိုးပွားပါသည်…)
ဟုတ်ကဲ့… (သိသလောက် ၀င်ဖောသွားပါတယ်…)
မိုးကြိုးသွားဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းဝင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို မွေးဖွားပေးသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ရဲ့ မြန်မာအမည်ဟာ ဗိုလ်မိုးကြိုးပါ။ သူ့အလောင်းကို ပြန်ရှာဖော်နိုင်ရင် မိုးကြိုးသွားကို တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်..။
မိုးကြိုး = မိုး + ကြိုး
မိုး= ကောင်းကင်မှ ကျလာသော ရေ
ကြိုး = ရှည်ရှည်မျောမျော နှင့် တစ်စုံတစ်ခု ကို ချည်နှောင်လို့ ရသော အရာ
မီးကြိုးပေါ်တင်လိုက် မီးတော့မှိတ်မသွားဘူးဗျ နည်းနည်းမှိန်ကျသွားတာတွေ့ဘူးတယ်
သေနတ်နဲ့လဲ စမ်းရော သေနတ်မှန်ပြီးတစစီဖြစ်သွားရောဗျ.။။။
မိုးကြိုးပစ်လို့ ဖုန်းလိုင်းပျက်တာလား ဘာလားတော့မသိဘူး
ရုံးမှာ လိုင်း 7လိုင်း ရှိတာ တလိုင်းမှ ခေါ်လို့လဲမရ ပြောလို့လဲ မရ ဖြစ်နေတာတော့ ကြာပြီ
တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ မကြာခဏပြတ်တောက်နေတာက ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အချိန်မှာ စက်တွေ ပိတ်ထားရလို့ ဆိုရင်တော့ –
မတ် – မေ (နွေ)
ဇွန် – အောက် (မိုး)
ိနို – ဖေါ် (ဆောင်း) ဆိုတော့ ဇွန်ကနေ အောက်တိုဘာလ အထိ ၅ လတော့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ မကြာခဏပြတ်မယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရာသီဥတုတွေက အမြဲဖေါက်ပြန်နေတာဆိုတော့ကာ….
အားပါး………..တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေတော့…..” သေပြီ ဆရာ”။
တော်သေးတာပေါ့ အာမခံတနှစ်ရှိလို့ ပြန်ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
အိမ်နားမှာလည်း မိုးကြိုးပစ်တာ မိုးကြိုးကတော့ ဘယ် မိုးကြိုးလွှဲကနေ မြေကြီးထဲဝင်သလဲမသိဘူး၊အိမ်ကရှိသမျှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ TV,ADSL Router,Door Bell,CCTV camera,Door remote အကုန်ပျက်တယ်၊ရေခဲသေတ္တာကတော့ safe guard ခံနေတော့ safeguard ဘဲ လောင်သွားတယ်၊အဲဒီကတည်းက မိုးဦးလေဦးမှာ မိုးကြီးကြီးရွာပြီဆိုရင် Main Switch ကနေ ပိတ်ထားလိုက်တော့တယ်၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အကုန် safeguard ခံထားရင်များ ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပေမယ့် မီးအားမပြည့်တဲ့အခါ safeguard ကဖြတ်ချနေတာနဲ့ ဘာမှလုပ်မရဘူး၊
အဲဒီတုံးက ကြောင်လေးပြောသလို မိုးကြိုးသွားရှာဘို့ စိတ်ကူးမရလိုက်ဘူး၊
ပြင်းထန်တဲ့အပူရှိန်ကြောင့် မြေကြီးထဲက အရာဝတ္ထုတစ်ခု ဓါတ်သဘာဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုပဲ ကျွန်တော်လက်ခံထားပါတယ်။အသွင်ပြောင်းကျောက်၊မီးသင့်ကျောက်ဆိုတာလိုမျိုးပါ။ အခြားသတ္ထုတွေ
မိုးကြိုးသွားကြောင့်စီးပွားတက်တာကတော့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဆက်စပ်မှုပါ။
ဗိုလ်မိုးကြိုးအလောင်းသွားဖော်ရင် တရားစွဲခံရမှာကြောက်တယ်၊မိုးကြိုးသွားမမြင်ဖူးရင်လဲ ရှိပါစေတော့။
သေနတ်နဲ့မပစ်ခင် ဓါးနဲ့အရင် စမ်းခုတ်ကြည့် သင့်သေးတယ်။
ဖုန်းလိုင်းတွေအကြာကြီးပျက်နေတာဆိုရင်တော့ ၁၀၂ ကိုဆက်ပြီးအကြောင်းကြား သင့်တယ်။
လေလှုိုင်း(electromagnetic wave)နဲ့လွှင့်ရတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ နွေမှာ နေအရမ်းပူပြီးတံလျှပ်ထလို့ မကြည်ဘူး။ဆောင်းမှာနှင်းတအားပိတ်တော့ မကောင်းဘူး၊မိုးမှာမိုးတအားရွာတော့ မရပြန်ဘူး၊ ရတဲ့အချိန်လေးပဲသုံးကြပါဗျာ။
မိုးကြိုးပစ်တဲ့အချိန်ဓါတ်ဗူးထဲ ကိုရအောင်ဝင်နေနိုင်ရင် မိုးကြိုးလွတ်တယ်တဲ့။
မိုးကြိုးပစ်ရင်မီးကြိုးကလှည့်ဝင်တတ်တယ်၊မီးကြိုး(ကြေးကြိုး) ကလေထဲမှာ open ဖြစ်နေတယ်လေ။
TV ကို Antenna ကြိုးပါဖြုတ်ထားရမှာ။အိမ်မှာမိုးကြိုးလွှဲတတ်ထားသေးလား။ မြေကြီးထဲဝင်သွားတဲ့